'दुई वर्ष भयो स्वर्ग जान नपाएको, यसपालि पुगिएला कि' :: Setopati
'दुई वर्ष भयो स्वर्ग जान नपाएको, यसपालि पुगिएला कि'
सबिना श्रेष्ठ काठमाडाै‌ँ, भदाै‌ १३
उनी इन्द्रकी आमा बसुन्धरा हुन्। येँया अर्थात् इन्द्रजात्रामा 'दागिं' भनेर चिनिन्छन्।
काठमाडौं, खुसिबुँ निवासी मंगलमान डंगोलले दागिं बनेर यो परम्परा जोगाएको नै २३ वर्ष भयो।
कुमारी रथ तान्ने दिन उनी दागिं बनेर निस्कन्छन्। त्यो दिन काठमाडौंको तल्लो टोल (कोहने) मा रथयात्रा हुन्छ। रथले यात्रा गरेका टोलमा दागिं हिँड्छ। दागिंसँगै वरिपरि वर्षभरि निधन भएकाहरूको परिवार हिँडछन्। मृत्यु भएका व्यक्तिहरूलाई दागिंले स्वर्गलोक पुर्याउँछ भन्ने विश्वास छ।
स्वर्गलोक पुग्न दहचोकस्थित इन्द्रदहमा नुहाउनुपर्ने हुन्छ। करिब दुई वर्षयता भने त्यो परम्परालाई निरन्तरता दिँदै इन्द्रचोकसम्म पुग्न नपाएको दागिं मंगलमानको गुनासो छ।
'म अन्तिम पटक ०७३ सालमा इन्द्रदह पुगेको थिए। भुइँचालोका कारण नजिकैको पाटी भत्किएको हुँदा त्यो वर्ष चन्दा पनि दिएर आएँ,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'त्यसयता भने गएको छैन।'
मंगलमानका अनुसार इन्द्रजात्राको त्यो दिन उनको पुरानो घर नरदेवीमा भिड लाग्छ। दागिंसँगै त्यो दिन हिँड्न नसक्ने परिवार त्यहाँ पूजा गर्न आउँछन्।
त्यो दिन उनले बिहानै नुहाइधुवाइ गरेर निराहार बस्नुपर्छ। काठमाडौं मरुगणेशथानस्थित लुकुफल्चाबाट उनी दागिं बनेर निस्कन्छन्। गणेशथान घुम्छन्। फ्याफल, याट्खा, टेंगल, बांगेमुडा, असन, इन्द्रचोक, हनुमानढोका, जैसिदेवल, लगन, ह्युमटा, भिमसेनथान हुँदै मरुमै गएर टुंगिन्छ।
दागिंसँगै हिँड्ने मान्छेले बाटोभरि सदबिऊ छर्छन्। छरेर बाँकी रहेको गणेशथानमा खन्याउँछन्। यति बेलासम्म बिहानको करिब तीन बजिसकेको हुन्छ।
दागिं बनेका मंगलमानलाई दाजुभाइले समातेर हिँडाएका हुन्छन्। दाजुभाइ लगायत सँगै हिँड्नेलाई दागिंको परिवारले समयबजी खुवाउनुपर्छ। त्यसपछि, दागिंसँग हिँडेका अन्य व्यक्तिमध्येमा इन्द्रदह जान चाहनेहरू त्यहीँबाट छुट्टिन्छन्।
'इन्द्रदहमा मान्छेहरू नुहाइरहेको बेला दह बीचमा 'छप्ल्याङ्ग' आवाज आउँछ भनिन्छ। त्यो भनेको बाँधेर राखिएका इन्द्र त्यहीँबाट इन्द्रलोक जानु हो,' मंगलमानले भने।
'को हुन् त बाँधेर राखिएका इन्द्र?'
किंबदन्तीअनुसार इन्द्रकी आमा बसुन्धरालाई एकपटक ब्रत बस्नु थियो। त्यसका लागि पाल्जा स्वाः (पारिजातको फूल) चाहिने भयो। त्यो इन्द्रलोकमा पाइन्नथ्यो।
उनले छोरा इन्द्रलाई पाताल पठाइन्। फूल खोज्दै इन्द्र काठमाडौं मरुस्थित भै–केवः पुग्छन्। एउटा किसानको बगैंचामा फूल देखेपछि टिप्छन्. किसानले इन्द्रलाई चोर ठानेर समात्छन्। डोरीले पाता कसेर बीच सडकमै जात्रा गर्छन्।
उनै आमा 'दागिं' बनेर येँया पुन्हीमा देखिन्छिन्। रातभरि इन्द्र खोज्दै भौंतारिन्छिन्।
दागिं बनेर इन्द्रजात्रामा मंगलमानले भौंतारिने यो २४ औं पटक हो। २०५२ सालमा पहिलो पटक बनेका थिए। तर त्यो वर्ष दागिं बन्नु उनका लागि भने सहज थिएन।
बुबा दानरत्नको निधन भएको वर्ष थियो त्यो। बुबा गुमाउनुको पीडा एकातिर। परम्परा धान्नु पर्ने बाध्यता अर्कोतिर, विकल्प थिएन।
'बुबा बितेको भर्खरै ६ महिनाजति भएको थियो। वर्खी बारेको सेतो लुगामा थिएँ,' मंगलमानले भने, 'जात्रामा दागिं त बन्नु पर्ने नै थियो। तर लुगा, मुकुट लगाउँदा बुबा नै सम्झिइरहेँ।'
उनी अघिका दागिं उनका बुबा नै थिए। इन्द्रजात्रामा यो भूमिका गर्ने मंगलमानको 'डंगोल' परिवार नै हो। वर्षौंदेखि परम्परा हस्तान्तरण हुँदै आएको छ। बुबा दानरत्नको निधनपछि मंगलमान बने। उनीपछि छोरा दीपेन्द्रको पालो आउँछ। दीपेन्द्र पनि यो परम्परालाई निरन्तरता दिन तयार छन्।
किंबदन्तीमा भनिएकी इन्द्रकी आमा दागिंले भने छोरा इन्द्र खोज्दै जाँदा काठमाडौंमा भेट्छिन्। इन्द्रलाई बाँधेर राखेको देख्छिन्। तर इन्द्र छुटाउन उनलाई सहज थिएन। स्थानीयले दिएका दुई सर्त मान्नुपर्थ्यो।
दोस्रो– धान पकाउनका लागि 'कुहिरो' ल्याउनु। कुहिरोका कारण शीतको थोपा बन्छ। पानी नपर्ने मौसममा किसानलाई त्यो महत्वको हुन्छ।
यसैले इन्द्रजात्रापछि 'कुहिरो' लाग्ने र चिसो मौसम सुरु हुने स्थानीयको मान्यता छ।
'इन्द्रदहसम्म पुग्न घरमा सबैको कुरा मिल्नुपर्छ। म एक्लै जाने होइन, दाजुभाइको पनि सहमति हुनुपर्छ,' मंगलमानले भने, 'त्यहाँ जाने बेलासम्म करिब ३, ४ बजिसकेको हुन्छ। पहिले पो खालि खुट्टा गइन्थ्यो। अहिले सवारी साधनको सुविधा भइसकेकाले दाजुभाइ पनि गाडी नभइ मान्दैनन्।'
यो वर्ष इन्द्रजात्रामा दागिंलाई इन्द्रदहसम्मै पुर्याउन कीर्तिपुरका मेयर र वडाअध्यक्ष लागि परेका छन्। सवारीसाधन लगायत सुविधाका लागि बैठक बस्ने तयारी हुँदैछ।
सबै कुरा मिलेमा यो वर्ष दागिं इन्द्रदहसम्मै पुग्छ।
सायद! बाँधेर राखेको इन्द्र दह बीचबाट 'छप्ल्याङ्ग'आवाज निकाल्दै इन्द्रलोक जान पाउनेछन्।
प्रकाशित मिति: शनिबार, भदौ १४, २०७६, ०२:१८:००